Ronaldo; “Kuwa i Neceb xitaa waan u baahanahay, waayo waxay iga caawiyeen inaan gaaro dhammaan guulihii aan xaqiijiyay” – Gool FM
Ronaldo; “Kuwa i Neceb xitaa waan u baahanahay, waayo waxay iga caawiyeen inaan gaaro dhammaan guulihii aan xaqiijiyay”
(London), 27 Okt 2016 –Weeraryahanka kooxda Kubadda Cagta Real Madrid iyo xulka Portugal, Cristiano Ronaldo ayaa wareysi dheer siiyay Wargeyska ‘Coach Magazine‘ ee Waddanka Ingiriiska, waxaana lagu weydiiyay su’aalo badan oo ku saabsan isboortiga iyo Noloshiisa.
Kumuu ahaa xidiggii aad jecleyd yaraanantaadii?
Markaan yaraa waxaan daawan jiray Xiddigihii Bortuqiiska sida Figo iyo Rui Costa, waxaana arkay sidii ay u gudanayeen waajibaadkooda masraxa caalamiga ah, waxaana rabay inaan gaaro heerkaasi.
Sidee Waalidkaa kaaga caawiyeen inaad bilowdid Nolosha Kubadda Cagta?
Waalidkeey waxay ii ogolaadeen inaan ka tago Jasiiradda Madeira anigoo 12 jir ah, waxaana ku biiray Sporting Lisbon, waan xasuustaa anigoo ooynayay, laakiin hadda waxaan haysta wiilkayga, waana garan karaa sida ay ugu adkeyd waalidkeey inay i soo fasaxaan, waxay sameeyeen sidii habooneyd marka ay timaaddo noloshayda ciyaaraha, laakiin dhankooda howshu sidaa uma sahlanayn.
Yuu ahaa qofkii sida weyn kuu taageeri jiray Noloshaada?
Hooyadeey, weligeed way i taageeri jirtay, welina si joogto ah ayay ii taageertaa.
Ma jiray qof si gaar ah dadaal ugu bixiyay inuu kugu taageero inaad nolsohaada Isboortiga bilowdo?
Wuxuu ahaa Aurelio Pereira (Madixii ciyaartoyda u soo indha indheyn jirey Sporting Lisbon) waa ninkii Daaha iga rogay, mar walbana waa nin Noloshayda qiimo weyn ku leh, wuu i aaminay wuxuuna ahaa shaqsi aad u wanaagsan.
Maxaad ka baratay Cayaarihii Qarammada Yurub 2016?
Waan ogaa inaan saameyn ku yeelanaynin ciyaartii garoonka maadaama aan dhaawacmay daqiiqaddii 25-aad, laakiin weli waxaan ka ciyaari karay door weyn, waqtii nasashada (half-time) waxaan jeediyay hadal aan ugu tilmaamayay asxaabtayda jihooyinka isla markaana ku dhiirri gelinayay, waxay i bartay muhiimadda ay leedahy in la noqdo (hal), kubadda cagtu ma ahan 11-ka qofood ee garoonka ku jirta ee intaa way ka ballaaran tahay.
Waa maxay Cashirkii ugu muhiimsanaa ee Noloshaada aad barato?
Inaan adeegsado dadka xun, khibradna ka qaato si ay ii dhiirri geliyaan, dhab ahaantii waan u baahanahay kuwa i neceb, waayo waxay iga caawiyeen in aan gaaro guulihii aan xaqiijiyay.
Ciyaartooy ahaan waa kee Tababaraha saameynta ugu weyn kugu yeeshay?
Waa Sir Alex Ferguson oo booska Aabahay oo kale ii ah, dhammaan tababarayaashii i soo maray way fiicnaayeen, laakiin markii aan Real Madrid imaaday waxaan ahaa Nin, markii aan Manchester United imaadayna waxaan ahaa Wiil, si kedis ah ayaan kaga mid noqday Naadiga ugu weyn Caalamka, waqtigaasna waxaan u baahnaa qof sida Sir Alex oo kale ah.
Yuu ahaa Ninkii ugu adkaa ee aad la ciyaarto ama ka hor tagto?
Muddo sanado ah waxaa loollan adag uu igala dhexeeyay Ashley Cole, kaas kuma siinayo hal ilbiriqsi oo aad ku neefsato, wuxuu ahaa Laacib daran oo bir ah, xawaare badan, ku daran Taakooyinka, markii uu joogay heerkiisii ugu sarreeyay waad garwaaqsanaysay inaadan kulan sahlan ugu tageynin.
Waa kee Laacibiinta kaa soo horjeeda midka kuugu cajabiyay?
Waxaa jira Ixtiraam weyn oo aan is dhaafsanno aniga iyo Lionel Messi, Saxaafaddu waxay ka dhigtaa sida inay xurguf weyn naga dhexeyso, laakiin taa ma jirto, mana ahan inaan nahay saaxiibo isku fiican, laakiin labada dhinac waxaan labada dhinac is dhaafsannaa xushmad.
Markaad dagaal tagaysid ciyaaryahankee jeceshahay inuu dhinacaaga joogo?
Pepe, ma ahan inuu Difaac fantaastig ah yahay, wax uu kaga tegayo garoonka ma jirto, intii karaankiisa ah wuu ku siinayaa.
Ciyaartoydii aad isla soo ciyaarteen iyo tababarayaashaadii hore keebuu ahaa Mufakirka ugu xeel dheer Kubadda Cagta?
Tababareyaal waaweyn ayaan ka soo hoos ciyaaray, laakiin Jose Mourinho waxa uu ahaa Mufakir weyn markay timaaddo dhinaca Falanqeynta, wax walba illaa xad si faah faahsan ayuu u kala dhigayaa.
Waxaa soo koobay: Haaruun Yuusuf Khasaaro
DEG DEG: Banaadir oo u soo gudubtay Finalka koobka Janeraal Daa’uud